NY DIDY FOLO | FJKM Amboniloha
FIZARANA VOALOAHANY :
Aorian’ity lesona ity ny mpianatra dia hahafehy tsara ny didy folo, hahay tsianjery sy hahay izay tiany hambara, hanao ho zava-dehibe ny didy folo ka hanaraka izay laizainy eo amin’ny fianany andavan’andro.
Fanontaniana famakafakana :
Ilaina ve ny didy sy ny fitsipika eo amin’ny fianainana ?
1. SORATRA MASINA:
Eksodosy 20, 1-17
Matio 22, 37-40
I Timonty 1, 5-10
Mizara roa ny didy folo dia ny momba an’Andriamanitra sy ny momba ny olombelona.
Ny didy efatra voaloany dia momba an’Andriamanitra ary ny didy enina farany dia momba ny olombelona.
Ny didy efatra voalohany dia mitantana antsika mba hitiavantsika an’Andriamanitra ary ny fizarana faharoa ao amin’ny didy folo, izany hoe ny didy enina farany dia manoro antsika ny amin’izay tokony hatao mba hitiavantsika ny namana sy ny manondidina.
Mifanaraka amin’izany tanteraka ny filazan’I Jesoa momba ny didy sy lalàna, hoy Izy:”Tiava an’I Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahianao rahetra ary amin’ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany , ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantsoanan’ny lalàna rehetra sy ny mpminany “.
Ny didy sy ny fitsipika dia tena ilaina mba hanoro ny lalana tokony haleha ka hahalalana ny mety sy ny tsy mety, ny azo atao sy ny tsy azo atao ary mba hahafantarana fa diso ka mila mifona sy mibebaka ka miarina ho ami n’ny lala-marina indray.
Ny olona tsy manaraka na tsy mil any didy sy fitsipika dia olona baranahiny ka tsy afaka ny handroso ho amin’ny tsaratsara kokoa, ny olona tsy tan-dalàna dia olona tsy miraharaha izay fandikan-dalàna ka tsy azo antoka.
Tsy maintsy mila didy sy fitsipika isika raha mbola olombelona mbola eto an-tany.
Hiezaka isika hanantanteraka izay lazain’ny didy folo.
Ny didy folo.
Iza no mora tanterahina indrindra amin’ny didy folo?
Catégories :	Fampianarana Katekomena	/ par AnjGab 13 septembre 2017